Na mba dị iche iche, bitcoin ahịa nwere ike ịdị iche - Blockchain News
Gịnị mere na mba dị iche iche ahịa maka bitcoin nwere ike iche
Dabere na mba na kaadị-exchange udu, ndị na-eri kwa kaadị akpan owo nwere ike ịdị iche. Anyị atụleela ọtụtụ ihe na-emetụta guzobe ahịa na kaadị ahịa, na otú ha na-metụtara ala ọnọdụ nke suppliers nke cryptocurrency.
Na mbụ, ọ dị mma ịtụle eziokwu ahụ bụ na e nwere ka ọ na-adịkarị nabatara dịruru ná njọ maka iji cryptocurrency. n'ihi na ụfọdụ, ihe mere ego bụ nkwenkwe bụ na ekele na cryptocurrency, blockchain technology na-echere oge nke-eto ngwa ngwa. n'ihi na ndị ọzọ, ọ bụ nkwenkwe bụ na ndị Bitcoins na ha zụtara taa na-eme n'ọdịnihu ga-akwa ina na-adị kwa ụbọchị ndụ. N'ihi na ike, na yikarịrị kasị, na ihe mere ịzụ bitcoin bụ ọchịchọ ime a uru.
Ọzọkwa, anyị nile maara na bitcoin adịghị a ufọk ufene price, ọ bụ decentralized cryptocurrency nke zuru ụwa ọnụ digital aku na uba na-adịghị kwadoo site ọ bụla akpan owo, na-adịghị nyere na ihe ọ bụla fiat ego, na-abụghị nke ọ bụla ala nke ụwa. Otú ọ dị, dị ka ọtụtụ n'ji ngwongwo, na bitcoin price a kpụrụ na ndabere nke ọkọnọ na ina ya. Yabụ, price nke ụwa mbụ cryptocurrency otu itule n'etiti price awa site na-ere ákwà na ihe ndị na-azụ ndị dị njikere iji kwụọ ụgwọ.
E nwere mba ebe trading na cryptocurrencies na-aju, na bitcoin naanị ike zụta kpọmkwem site mgbere-suppliers, na bụghị na kaadị-exchange mgbanwe. Ọmụmaatụ, mgbe interdiction nke mgbanwe na China, olu nke azụmahịa na P2P plattform nke LocalBitcoins ka n'ụzọ dị ịrịba ama na ụba. N'ọtụtụ mba, iji zụta bitcoin, mkpa ka i nwere a akụ na ihe njirimara kaadị. Ọmụmaatụ, South Korea ego regulator ka eze na iwu-amaghị aha azụmahịa, ugbu a na-azụ ahịa na-chọrọ re-aha virtual akaụntụ n'ime akaụntụ ezigbo aha.
N'ihi usoro iwu mgbochi, ere bitcoin dị otú ahụ P2P plattforms ka LocalBitcoins pụrụ isi setịpụ ihe inflated price na ijide n'aka na ndị na-azụ ga-akwụ ya. “suppliers” nke bitcoin na-anọchi anya na ụdị ụlọ ọrụ ndị na-doputa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke bitcoins na fiat ego, na ha nwere ike ikpo ha okwu na obere azụ ahịa, karịsịa ma ọ bụrụ na mpaghara bụ na oké ina cryptocurrencies. Ọmụmaatụ, na South Korea bitcoin bụ na nkezi $ 400 oké ọnụ karịa na US, na ihe dị iche maka ire na zụọ pụrụ ịbụ si $ 1800 ka $ 3000. na India, na bitcoin-ere ákwà na-enye ego na a price 20% elu karịa ihe arụnyere na US ahịa. The dị iche na price maka ire na zuo nke bitcoin na India bụ banyere $ 1000. na China, na bitcoin ọnụego bụ $ 100 elu karịa na US, na ego a na-eresị na zụtara a dị iche nke gburugburu $ 500. N'otu oge ahụ, na Russia na bitcoin ọnụego bụ $ 100 ala na ihe hà ọnụego cryptocurrency na EU mba, na ihe dị iche n'etiti ikele na ire-enye nwere ike ịbụ banyere $ 400. N'agbanyeghị ndịrịta iche dị otú na price, na-ere ákwà mgbe niile nwere ndị na-azụ ndị na-enweghị ndị ọzọ na-ahọrọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ iji nweta n'ime World of kaadị.
The kaadị ahịa bụ ka dị obere na ọ dịghị onye pụrụ ịhụ ihe ndị na njedebe ikpeazụ nke bitcoin bụ ma ọ bụ ihe ga-eme n'ọdịnihu nke ọrụ a ga-ele anya dị ka. Na nke a ahịa ugbu a na e nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu na-agbaso otu ihe mgbaru ọsọ – ime a uru. Na nke a pụtara na na otu ụbọchị dị otú ahụ egwuregwu ga-ahapụ ahịa, na-ewere na ha na-akwụ ego. Ma na a dịruru ná njọ, e nwere otu isi uru – mgbe nke a mere, ò ina ga belata niile cryptocurrencies ahịa na otu larịị dị na mba niile na ahịa niile. Ruo mgbe a mere, na-agbalị nnọọ na-enwe ihe na-eme, achịkwa na nke ugbu a na ogbaaghara.
Bitcoin Ahịa nwere ike ịdị iche
Previous Post:Kpụrụ Mmepe nke Blockstream ike a supercomputer on blockchain
Next Post:Coinbase amalite ikpeazụ ule nke Segwit
February 6, 2018 na 8:25 AM
Ka 11, 2018 na 6:47 AM
June 26, 2018 na 6:06 AM